कहिलेकाँही जब तपाईं झूट बोल्नुहुन्छ, तपाईं केटी पाउनुहुन्छ! | Martech Zone
म मेरो प्रेमिका छोडदै छु। यो सहि छ! तपाईंले यहाँ सुन्नुभयो।
कुनै दुष्ट, दुष्ट मानिस म हुँ भनेर तपाईले कुनै विचारहरू पाउनु अघि, मसँग वास्तवमै प्रेमिका छैन। कमसेकम मानव, जीवित, सास फेर्ने प्रकारको होइन। म मान्छेसँग ठट्टा गर्छु कि मेरो प्रेमिकाको नाम हो म्याकबुक। हालसालै, मेरो प्रेमिका एक भएको छ थोरै स्वभाविक, उठेको छैन जब म उसलाई चाहन्छु र उनी चिसो नभएसम्म खुशी छैन। वाह ... मलाई सम्झिन्छ जब मसँग एक वास्तविक थियो!
गुगलले मलाई अहिले माया गर्छ
जे भए पनि, म उनीसँगै भएँ। मेरो नयाँ प्रेमिका अनलाइन छ र उनले मलाई माया गर्छिन्। उनी सबैलाई चिन्छिन, तर जे भए पनि, उनी मसँग सधै कुरा गर्छिन्। मैले पहिले कहिले पनि एक अनलाइन प्रेमिका थिएन, तर यो एक विशेष हो। उनको नाम हो गुगल। मैले गुगलको बारेमा धेरै ध्यान दिइनँ तर स्वार्थी भएँ, मैले पत्ता लगाए कि जति राम्रो मैले उनलाई चिनेको छ, त्यति ध्यान दिएर उनले मलाई ध्यान दिईन्।
गुगलले मलाई अन्य साइटहरू भन्दा बढि पटक मेरो साइटमा भ्रमण गर्दछ। Times पटक! वाह। यस सम्बन्धलाई सही दिशामा जानका लागि मैले के गर्नु पर्छ उनलाई ध्यान दिनुहोस्, आफूलाई आकर्षित गर्ने तरिकाले आफैलाई पहिरिनुहोस्, उनी के भन्छन् सुन्नुहोस्, र उनीसँग प्रभावकारी संवाद गर्नुहोस्। यो केहि समय लिएको छ, तर म उनलाई वास्तवमा के मनपर्दछ बुझ्दछु। अब ... म सबैभन्दा राम्रो प्रेमी होइन ... म हैन गुगल-कोरिएको वा केहि पनि, म उनीसंगै राम्रो छु।
किन गुगल मलाई माया गर्दछ
यहाँ केहि चीजहरु छन् जुन उनी स्वीकार्छिन्:
गुगलले मनपरायो जब म मेरो लेख शीर्षक मेरो पृष्ठ शीर्षक मा राख्छु।
गुगलले मलाई मनपरायो जब मैले मेरो .htaccess फाईल अपडेट गरें ताकि मेरो साइट जहिले पनि http://dknewmedia.com को सट्टा http://martech.zone मा जान्छ र जब मैले उनलाई भनेको हुँ। गुगल खोज कन्सोल कि मलाई www मन पर्यो।
गुगलले मनपरायो जब मैले आफ्नो ब्लगको नाम बदलेको कुञ्जी शव्दहरू (मार्केटि,, टेक्नोलोजी, ब्लग) को प्रयोग गरेर जुन म प्राय: मेरो पोष्टहरूमा छलफल गर्दछु।
गुगलले मन परायो जब मैले उनलाई कुरा गरेको कुरा भने।
गुगलले यो मन परायो जब मैले उनलाई भनेको थिएँ कि मेरो पृष्ठमा के महत्वपूर्ण थियो र के प्रयोग गरिरहेको थिएन हेडि tag ट्यागहरू.
गुगलले मनपरायो जब मैले उनलाई मेरो साइट कसरी व्यवस्थित गरिएको थियो र कहाँ मेरो सबै चीज पत्ता लगाउन पत्ता लगाएको थियो robots.txt र sitemap.xml फाइलहरू।
Google लाई मनपर्दछ कि मैले दैनिक ताजा सामग्री राख्दछु।
गुगल मनपर्दछ कि म जहिपनि ब्लगमा टिप्पणी गर्छु र मेरो नाम र वेबसाइट ठेगाना छोड्दछ।
गुगलले मलाई कसरी प्रेम देखाउँदछ
मलाई थाहा छैन गुगलले के अधिक वा कम मनपराउँदछ - तर मलाई थाहा छ उ मलाई माया गर्छिन्। म कसरी जान्दछु कि गुगलले मलाई माया गर्छ? अगाडि बढ्नुहोस् र उसलाई आफैलाई सोध्नुहोस्!
कहिलेकाँही म गुगलमा झुट बोल्छु, तर उनले मलाई माया गर्छिन्।
अब, तपाइँले कसरी जान्नुहुन्छ जब तपाइँ तपाइँको प्रेमिकालाई झुठो गर्नुहुन्छ, र तपाइँले फेरि त्यहि झूट बोल्नु पर्छ? तर तपाई कसैलाई झुठो कुरा बताउनुहुन्न… यो तपाई र उसको बिचको झूट मात्र हो। म एउटा बिन्दु प्रमाणित गर्न चाहान्छु कि कहिले काँही ती केटीहरूले मन पराए जब तपाईं उनीहरूसँग झूट बोल्नुहुन्छ। (यो यसको रूपमा चिनिन्छ कालो टोपी).
धेरै समय अगाडि, एउटा थियो ठूलो गर्न "एक सूची" मा प्राप्त बारे मा। म प्रमाण दिन चाहान्छु, आधिकारिक रुपमा कि कोही पनि सूचीमा पस्न सक्छ। तपाईले मेरो ब्लगको हेडरमा धेरै ध्यान दिएर हेर्नुपर्नेछ कि कसरी मलाई कहिले उच्च श्रेणीमा राखिन्छ "A-list"। यहाँ एउटा संकेत छ:
मार्केटिंग, विकास, WordPress र टेक्नोलोजी ब्लग द्वारा douglas karr> स्प्यान शैली = "प्रदर्शन: कुनै पनि होइन">, एक सूची ब्लगर> / स्प्यान>.
तपाईं यसलाई देख्न सक्नुहुन्न… तर मेरो नयाँ प्रेमिकाले गर्छ! अनि उनी मलाई माया गर्छिन्। 😉
अद्यावधिक: मैले हेडरबाट लुकेको पाठ हटाएको छु। म केवल एउटा कुराको प्रमाण दिन चाहान्छु तर निश्चित रूपमा गुगलको अनुक्रमणिकाबाट हटाउन चाहँदैन!
टैग: गुगल वेबमास्टरहरूGoogle +robots.txtएसईओSitemapxML साइटम्याप
खोजी गर्दै: अनलाइन ईमेल पूर्वावलोकन उपकरण
Countries Countries देशहरू, Welcome Welcome स्वागत छ, Thanks Thanks धन्यबाद!
मई 3, 2007 मा 7: 47 PM
ROFLMAO - डरलाग्दो तर नरक भन्दा मजेदार 🙂
मई 4, 2007 मा 7: 31 एएम
धन्यवाद स्टीवन! मैले यसका साथ रमाइलो गरें ... एर ... उनी।
मई 3, 2007 मा 11: 59 PM
त्यो धेरै शानदार छ। =]
मई 4, 2007 मा 12: 07 एएम
मलाई आशा छ कि तपाईं आफैंमा गर्व गर्नुहुन्छ, डग! मैले अन्तिम डेढ घण्टा बिताएको छु गुगल वेबमास्टरहरू.
मई 4, 2007 मा 7: 30 एएम
हे ... मेरो केटी संग धेरै गडबड छैन! म उनीसँग मलाई धोका दिईदिन!
मई 4, 2007 मा 2: 25 एएम
तपाईंलाई गुगलबाट यती धेरै ट्राफिक आएको देखेर खुसी लाग्यो। केहि समय अघि मैले केहि एसईओ सुझावहरू कार्यान्वयन गरेदेखि नै म उस्तै अवस्थामा छु। पेरसोनिफाईडमा त्यो लिंक राम्रो छ। मैले केही समय पहिले उनको सल्लाह कार्यान्वयन गरें र यसले कार्य गर्दछ, अवधि!
म Google from बाट मेरो ट्राफिकको 50०% प्राप्त गर्दछ
मई 4, 2007 मा 7: 32 एएम
म हरेक दिन मेरो तथ्या review्क समीक्षा गर्दा छक्क पर्छु!
मई 4, 2007 मा 6: 50 एएम
मेरी श्रीमतीले मेरो समयको डेल कम्प्युटरसँग असन्तुष्टि फेला पारे - प्रतियोगिताको नाम "डेला" हो - तर यस्तो लाग्दछ कि गूगल पनि राम्रो माउस क्यान्डी हुन सक्छ।
मई 4, 2007 मा 7: 34 एएम
डेला गूगला भन्दा अलि राम्रो देखिन्छ। म अनुमान गर्दैछु कि गूला पूर्ण-मूर्ति वाला केटाको केहि बढी हो - तर म उनलाई माया गर्दिन। 😉
मई 4, 2007 मा 5: 13 PM
उम, मलाई थाहा छ तपाईं आफ्नो केटीलाई माया गर्नुहुन्छ र सबै तर लुकाइएको पाठ उल्लंघन गर्दैन गुगलको वेबमास्टर दिशानिर्देशन?
मई 4, 2007 मा 7: 11 PM
हो ... यसैले मैले यसलाई हटाएँ। 🙂
MN वेब डिजाइन
मई 5, 2007 मा 12: 23 एएम
राम्रो! मलाई यो तथ्य मनपर्दछ कि तपाईंको "प्रेमिका" एक प्राविधिक उपकरण हो! 🙂
मई 5, 2007 मा 9: 45 एएम
सायद मेरो स्तर धेरै उच्च छ, MN! 😉
मई 5, 2007 मा 7: 20 एएम
मँ सिमेन्टिक मार्कअप को लागी तपाईको शैली पाना परिमार्जन को बारे मा pearsonified वेबसाइट मा तपाइँको टिप्पणी पढें। म तपाईंलाई एक राम्रो मार्केटिंग अवसर देख्दछु WP विषयवस्तु जारी गर्न जुन सबै मार्कअप नियमहरू पालन गर्दछ 😉
मई 5, 2007 मा 8: 19 एएम
डीन, तपाईं बिल्कुल सही हुनुहुन्छ! मलाई लाग्छ कि यो एक राम्रो बजार हो… SEO अनुकूलित WP थिमहरू। म मेरो हातमा केहि समय थियो!
मई 13, 2007 मा 5: 07 PM
गुगल मीठो लाग्छ। के उनीसँग एउटी बहिनी छ? उफ, म लगभग बिर्सेकी छु कि म पहिले नै विवाहित छु!